လူတစ်ယောက်ကိုချစ်မိလို့ရရှိလာတဲ့လှပတဲ့နာကျင်မှုတွေဆိုတာ💛💛 – Trend.com.mm
Posted on July 25, 2018 July 30, 2018 by Shun Lei Phyo
သင်လူတစ်ယောက်ကိုသိပ်ချစ်မိနေပြီလား? အိုကေ ဒါဆိုရင်ဒီလိုအချစ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လှပတဲ့နာကျင်မှုတွေကိုသင်ခံစားရမှာအသေချာပါပဲ။ မေးခွန်းရှိနိင်တယ် နာကျင်ပါတယ်ဆိုမှာ ဘယ်လိုလို့လှပတဲ့အရာဖြစ်မလဲပေါ့၊ တစ်ခြားနာကျင်မှုတွေကသာ အကျည်းတန်တဲ့နာကျင်မှုတွေဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပင်မဲ့ အချစ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နာကျင်မှုတွေကိုတော့ လှပတဲ့ နာကျင်မှုလို့ပဲတင်စားပါရစေ…ဟုတ်ပြီဒါဆိုဘယ်လိုနာကျင်မှုတွေလဲသင်ရော ဒီလိုနာကျင်မှုတွေကိုခံစားနေရသလား(သို့)သင့်ကြောင့်လူတစ်ယောက်ကဒီလိုနာကျင်မှုတွေခံစားနေရသလား ဆိုတာသိနိုင်စေဖို့ …
(၃) သင်ထက်သူများကို ပိုမေတ္တာထားတာမျိုးတွေတွေ့ရင်ရင်နဲ့တမျှနာကျင်ရပါလိမ့်မယ်
အပေါ်ကအချက်တွေကိုလူတစ်ယောက်အတွက်သင်ခံစားနေရပြီဆိုရင်သင်သူ့ကိုချစ်နေပါပြီ၊ ဒီလိုချစ်တဲ့စိတ်ကြောင့်လည်း အချစ်ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့လှပတဲ့ နာကျင်မှုကိုသင်ခံစားနေရတာပါ။
ဒီလိုလှပတဲ့နာကျင်မှုတွေခံစားရတိုင်း စိတ်ဓာတ်ကျပင်ပန်းပြီးမနေနဲ့ဒီနာကျင်မှုတွေကို အချစ်အဖြစ်သိသိသာသာပြောင်းလဲယူပြီးကိုယ့်နာကျင်မှုတွေကိုအချစ်အဖြစ်တစ်ဖက်လူနားလည်
အောင်သက်သေပြရင်း နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ချစ်သောသူတိုင်း ပေါင်းဖက်နိုင်ကြပါစေ…
သငျလူတဈယောကျကိုသိပျခဈြမိနပွေီလား? အိုကေ ဒါဆိုရငျဒီလိုအခဈြကွောငျ့ဖွဈပျေါလာတဲ့လှပတဲ့နာကငျြမှုတှကေိုသငျခံစားရမှာအသခြောပါပဲ။ မေးခှနျးရှိနိငျတယျ နာကငျြပါတယျဆိုမှာ ဘယျလိုလို့လှပတဲ့အရာဖွဈမလဲပေါ့၊ တဈခွားနာကငျြမှုတှကေသာ အကညျြးတနျတဲ့နာကငျြမှုတှဖွေဈကောငျးဖွဈနိုငျပငျမဲ့ အခဈြကွောငျ့ဖွဈပျေါလာတဲ့နာကငျြမှုတှကေိုတော့ လှပတဲ့ နာကငျြမှုလို့ပဲတငျစားပါရစေ…ဟုတျပွီဒါဆိုဘယျလိုနာကငျြမှုတှလေဲသငျရော ဒီလိုနာကငျြမှုတှကေိုခံစားနရေသလား(သို့)သငျ့ကွောငျ့လူတဈယောကျကဒီလိုနာကငျြမှုတှခေံစားနရေသလား ဆိုတာသိနိုငျစဖေို့ …
(၃) သငျထကျသူမြားကို ပိုမတ်ေတာထားတာမြိုးတှတှေရေ့ငျရငျနဲ့တမြှနာကငျြရပါလိမျ့မယျ
အပျေါကအခကျြတှကေိုလူတဈယောကျအတှကျသငျခံစားနရေပွီဆိုရငျသငျသူ့ကိုခဈြနပေါပွီ၊ ဒီလိုခဈြတဲ့စိတျကွောငျ့လညျး အခဈြကွောငျ့ဖွဈလာတဲ့လှပတဲ့ နာကငျြမှုကိုသငျခံစားနရေတာပါ။
ဒီလိုလှပတဲ့နာကငျြမှုတှခေံစားရတိုငျး စိတျဓာတျကပြငျပနျးပွီးမနနေဲ့ဒီနာကငျြမှုတှကေို အခဈြအဖွဈသိသိသာသာပွောငျးလဲယူပွီးကိုယျ့နာကငျြမှုတှကေိုအခဈြအဖွဈတဈဖကျလူနားလညျ
အောငျသကျသပွေရငျး နှဈဦးနှဈဖကျခဈြသောသူတိုငျး ပေါငျးဖကျနိုငျကွပါစေ…
Taecyeon ရဲ့အေဂျင်စီအပြောင်းအလဲကြောင့် 2PM အဖွဲ့ပျက်ပြီလားလို့ ပရိသတ်တွေကစိုးရိမ်နေကြ
ဒီလိုနာကျင်မှုတွေမရချင်ရင် ကိုယ်ချစ်ရတဲ့သူတွေအနားမှာရှိနေတုန်း တန်ဖိုးထားပါ ❤️